ရာမဒန်ဥပုသ်လ ပရိုမိုးရှင်းမှာ ဆုတစ်ခုရယူပါ!
ရာမဒန်ဥပုသ်လ ချို့တဲ့သူများကူညီရေးအစီအစဉ်အတွက် FBS မှ ဆုတံဆိပ်တစ်ခု ရရှိခဲ့တဲ့အတွက် ပျော်ရွှင်ကြောင်း ကြေငြာအပ်ပါတယ်.
ရရှိခဲ့တဲ့ ငွေအမောင့်က ၆၂၉၇၈ဒေါ်လာပါ. အံ့အားသင့်ဖွယ်ပါ! ဒီငွေတွေနဲ့ လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ အလှူအတန်းတွေ အများကြီး လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်.တစ်ဦးချင်းအလိုက် လမ်းများ ပြုပြင်ပေးခြင်းနှင့် ရွာသားများရဲ့ အိမ်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုပြင်ပေးခြင်းတို့ကို KampungBunisari မှာကျွန်ုပ်တို့ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်.
FBS ရဲ့ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပရောဂျက် နှစ်ခု ပြီးစီးခဲ့ပါတယ်. အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရ ကိုယ်စားပြုတဲ့ ဘန်ဒေါင်းမြို့ စီမမ်းယမ် ခေါင်းဆောင်က FBS ကိုအင်ဒိုနီးရှားလူမျိုးထောင်ပေါင်းများစွာကို ကူညီခဲ့တဲ့ ချို့တဲ့သူများကူညီရေးကမ်းပိန်းအတွက် ဆုတံဆိပ် နှစ်ခု ချီးမြှင့် ခဲ့ပါတယ်. အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်နေ့ နဲ့ တစ်ချိန်ထဲ ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.
၁. ပျက်စီးသော လမ်းများ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း
လမ်းများဟာ ညစ်ပေမှုများနှင့် အလွန်ဆိုးရွားတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်, ရွှံ့များနှင့် ကျောက်ခဲများက လမ်းတစ်ခုလုံးပါပဲ. တစ်ခါတစ်ရံ လမ်းလျှောက်ဖို့တောင်အလွန်ခက်ခဲပါတယ်, အထူးသဖြင့် မိုးရာသီမှာပေါ့. ချို့ငဲ့သူများကူညီရေးအဖွဲ့ကငွေတချို့ကို ဒီလမ်းအတွက် သုံးလိုက်တာဟာ အကောင်းဆုံးစိတ်ကူးပဲလို့ကျွန်တော်တို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်ပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒါဟာရွာသားတွေရဲ့ ဘ၀ကို ပိုမိုလွယ်ကူစေပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ ၂ ကီလိုမီတာရှည်တဲ့ လမ်းကို ပြီးစီးအောင် ပြုပြင်ပေးခဲ့ပါတယ်.
၂. ရွာသားများအတွက် အိမ်များ ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးခြင်း
ကျနော်တို့ဟာ ပျက်စီးနေတဲ့ အိမ်တွေမှာ နေ နေတဲ့ ဆင်းရဲတဲ့ ရွာသားအချို့ကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်. သူတို့ဟာ အိမ်တစ်လုံးကို အနိမ့်ဆုံး အခြေခံစံနှုန်းနဲ့ ဆောက်ဖို့တောင် မတတ်နိုင်ကြပါဘူး. ဒီမိသားစုတွေဟာ စုတ်ပြတ်နေတဲ့ အိမ်ထဲမှာ ကျန်းမာတဲ့ ဘ၀ကို မမျှော်လင့်နိုင်ကြပါဘူး. အရင်ဦးဆုံး မတူညီတဲ့ ရွာ ၄ ရွာက ရွာသား ၄ဦးကို ကျနော်တို့ ရွေးချယ်ပြီး သူတို့ရဲ့ ၀ါးအိမ်တွေကို ပြန်လည် တည်ဆောက်ပေးခဲ့ပါတယ်.
ဒီဆုနှစ်ခုရဲ့ကွာခြားချက်ကတော့ အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရဟာ FBS ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ကုမ္ပဏီက ပြုပြင်ပေးထားတဲ့လမ်းပေါ်မှာ ကျောက်စာရေးထိုးပြီး မှတ်တမ်းတင်အသိအမှတ်ပြုထားမှာဖြစ်ပါတယ်.
FBS ကိုရွေးချယ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! အဲဒါဟာ တကမ္ဘာလုံးက သန်းပေါင်းများစွာသော ကုန်သည်တွေနဲ့ နေ့စဉ်လက်တွဲလုပ်ကိုင်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့အတွက် ကြီးမားတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်.ပြီးတော့ သူတို့ကိုပျော်ရွှင်စေတာဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးအမြတ်ဖြစ်ပါတယ်- အခမဲ့ -ရင်းနှီ မြုပ်နှံမှုသွင်းငွေ အာမခံ အစီအစဉ်, အကျိုးအမြတ်ကောင်းသော ပရိုမိုးရှင်းနှင့် ဘော့နပ်စ်များ, ယုံကြည်အားထာစရာကောင်းတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုများ.